विचार Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by सुशीला शाही २५ पुस २०७७
written by सुशीला शाही
म कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, म त एउटा सामान्य जनता जसले देश बनोस्, हाम्रो एक मतले एउटा कर्मठ, सच्चरित्रवान व्यक्तित्व जसले आफ्नो सारा व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई विधिवत रूपले दाहसंस्कार गरेर आफ्नो समुदायका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको जिम्मेवार पद र ओहदामा पुगेर देश बनाउन् भनेर मतदानकै लागि बसिबसाउ सहरदेखि धुलैधुलोको पहाडी भिरे बाटोमा अटेसमटेस भएर टनाटन यात्रु कोचिएको थोत्रो गाडीको यात्रा पछि घण्टौं पैदल हिँडेर मतदानको लागि मतदान केन्द्रसम्म पुगेको नागरिक हुँ ।
म त्यही सुशासन र समुन्नत देशको परिकल्पना गरेको नागरिक, आफ्नो मत प्रति मुक्तकण्ठले गर्व गर्ने मतदाता, आज देश प्याडल बिनाको डुङ्गा, बीच नदीमा डगमगाएझैं डगमगाउँदा, अटल आशा र भरोसाको चीत्कार सुन्न नसकेर नदीको बहावप्रति खबरदारी गर्न माध्यम खोजिरहेको, राजनीतिक पृष्ठभूमिको छायाँसँग मात्र पनि दूरदराजमा भेट्न नचाहने एक देशप्रेमी, देशको हालतप्रति हालाती बनिरहँदा भोलि जागिर कसको सिफारिसमा खाने, भाइलाई प्रहरी सेनामा कसरी घुसाउने भन्ने जस्ता डर देखिनु साह्रै बिडम्बनाको कुरा हो । कैयौं सपुतको रगतले लतपतिएको नेपाल आमाको चीर करुणाभन्दा पार्टी र संगठनलाई माथि राखेर दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पक्ष विपक्षमा उर्लनु सरासर देश र जनबलिदानप्रतिको गद्दारी हो । अब न यहाँ सार्वभौमसत्ता संसद विघटन गरेर देशले मुहार फेर्नेछ ,न खारेज ।
ओहदामा पुगेकाहरू पद र सत्ताको लागि तछाडमछाड गर्दैछन् त, नपुगेकाहरू दल र संगठनको लागि । यहाँ साच्चै देश र समुदायको लागि चिन्ता, चासो थियो भने विद्रोह आफ्नै दलभित्रबाट शुरु हुन्थ्यो, दबाब र खबरदारी आफ्नै पक्षका नेता र कार्यकर्तामा हुन्थ्यो । कसिङ्गर त यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र छ जसले देशलाई भित्रभित्रै दुर्गन्धित गरिरहेको छ । जबसम्म पार्टीभित्रैबाट आवाज उठ्दैन तबसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न । यो संविधान र संसद कसैका बाउको पेवा होइन, जतिखेर मन लाग्यो विघटन, जतिखेर मन लाग्यो संगठन । सरकार जिन्दावाद भन्नेहरू साच्चै देशप्रति अलिकति सहानुभूति छ भने यो प्रतिगमन र असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गरेर हेरौँ ।
यो कुनै किसानले मल नपाएर गरिएको विघटन होइन, कुनै नेपाली विदेशी भूमिमा पानी नपाएर छटपटाइरहेकोले भएको विघटन होइन, यो त सत्ता र पदको लालचले भएको विघटन हो । जनताको आँखामा धुलो उडाउने काम हो । अर्कोतिर प्रतिपक्षीले कसरी यस विषम परिस्थितिको फाइदा लिने भनेर चलखेल रच्दैछ । यहाँ देशले के पाउने होइन, बरु पार्टीले के पाउने, संगठनले के पाउने, अनि आफू कुन पदमा पुग्ने, आफ्नालाई कसरी सिफारिस दिलाउने यस्तै यस्तै ध्येयले आन्दोलनमा होमिँदैछन् ।
किन जनविरोध, किन नारा-जुलुस, किन मतभेदभन्दा पनि यहाँ धेरैलाई कसको आन्दोलन, कुन पार्टीको पक्षमा आन्दोलन मतलब छ चाहे त्यो जायज होस् या नजायज। जनतामा भएको भेडेपनको कमजोरीबाट फाइदा लिँदैछन् सत्ता र ओहदामा रहेका माहिर राजनीतिज्ञहरू । जनताको जनवाद, बहुदलीय जनवाद, नयाँ जनवाद यस्ता क्रान्तिका रणनीतिक लक्ष्यहरूले मात्र देश समाजवादतिर लम्किँदैन ।‌ यसका लागि पार्टीको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तअनुरुप विश्लेषण र प्रशिक्षणतिर जन-आवाज उठ्नु पर्ने थियो तर बिडम्बना अनेक गुटबन्दी, अराजकताको यहाँ अभ्यास हुँदैछ । धराशायी हुँदै गरेको यस मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता अब धुजाधुजा भएर पतन भइरहेको दृश्य जो अब चाँडै नै देखिनेछ, बस् त्यसैको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक विकल्प छैन । छ र ?
२५ पुस २०७७0comment
by shreyaaryal ८ कार्तिक २०७७
आफूलाई हेर्छु, आफ्ना वरिपरिका परिस्थितिलाई नियाल्छु, ऐना हेर्दा अनुहारमा लागेको धुलो सिसामा पुछ्दा नगएको सम्झन्छु। अझै पनि लाग्छ, धुलो सिसामै थियो। कति जिद्दी छौँ हामी, बद्लिएका हामी हौँ तरपनि भन्छौँ….“दशैं…
by gangaramgautam ५ कार्तिक २०७७
मेरी प्रिय उनी ! पुर्णिमाको जस्तै चकमन्न उज्यालो रात, गड्याङ्ग-गुडुङ्ग चर्किरहेको आकाश अनि पानीका थोपाहरूले तप-तप आवाज दिएर झरेका बलेनीहरू ! भित्तामा टाँगिएको घडीको टिकटिक आवाज कानमा गुञ्जिन्छ ! मध्य…
by drjoshi १ कार्तिक २०७७
खास जिन्दगीले आफूलाई पछ्याउँछ अथवा आफूले जिन्दगीलाई पछ्याइन्छ ? कुरो भ्रमात्मक छ । सिजन शरदको छ । अखबार, टिभितिर न्यूज हेर्छु , शिशिरभन्दा पनि चिसा छन् खबरहरू । उसो त…
आफ्नै पद्धतिसहित प्रकृति र सभ्यतातर्फ फर्कौँ ।
by rajadhikari २९ अशोज २०७७
सारा ब्रह्माण्डभरि रहेका वनस्पति, पशुपन्छी, जीवजन्तू सँगसँगै मानव जीवन पनि प्रकृतिले दिएकाे अनुपम वरदान सरह नै मानिन्छ । यहाँ प्रकृतिले पनि स्वयं आफ्नाे अस्तित्वलाई यिनै जीवनचक्र चलाउने प्राणी, वनस्पति, जीवजन्तुसँग…
मानसिक अस्वस्थता : संक्षिप्त विमर्श
by ramlohani २६ अशोज २०७७
विश्व स्वास्थ्य संगठनले “व्यक्तिले आफ्नो क्षमता उजागर गर्ने सक्ने, दैनिक जीवनका सामान्य तनावहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सिर्जनात्मक र उपयोगी काम गर्न सक्ने तथा समुदायमा यथोचित योगदान गर्न सक्ने तन्दुरुस्त अवस्था”…
लकडाउन र अनलाइन कक्षा
by adkdhiraj १८ अशोज २०७७
यो २१औं शताब्दीमा हामी सबैको जीवन हरेक कुरा सजीलैसँग चल्दै थियो । अहिले हामी देशको जुनसूकै कुनामा बसेको भएपनि जीवन यापन गर्नलाई पहिलेभन्दा अहिले धेरै सजिलो थियो । सबै मानिसहरू…
बलले दबाइएको चीत्कार
by pawanbikrampariyar १७ अशोज २०७७
बाजकाे पञ्जामा परेवा पर्‍यो भने परेवा बाँच्दैन पुरुष आफूलाई बाज सम्झिन्छ र बेलाबेला आक्रमण गर्छ महिलाहरूकाे शरीरमाथि । यस्तै अश्लील हर्कतले गर्दा पुरुषहरू आफ्नाे शिर निहुराएर हिँड्नु पर्ने दिन आएकाे…